ဤသည်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောရေနံပျံ့ခေါင်းမာဆေးလိပ်သောက်ခြင်းနှင့်အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်အနံ့ဖုံးကွယ်ထားကြောင်းဘို့ပြီးပြည့်စုံသောထိုခံစားချက်ရုတ်သိမ်းပေးရန်နှင့်စိတ်ဖိစီးမှုနှင့်ပင်ပန်း နေ့မှစ. စိတ်ဖိစီးမှုသက်သာရာနိုငျသောချစ်စရာကောင်းတဲ့အမွှေးအကြိုင်, ကြီးမြတ်ခြင်းနှင့်ငြိမ်းချမ်းစွာည '' အိပ်စက်ခြင်းဟာမွှေးကြိုင်မွှေးအကြိုင်တို့ကဝိုင်းရံလာနှင့်အတူအာကာသဖြည်။ အနံ့ပျံ့သင့်ရဲ့ Workspace သို့မဟုတ် home ကိုက်ညီဖို့ Zen-စတိုင်တစ်ခုထိပေးသည်။ ဒါဟာမဆိုပုံစံမျိုးနဲ့ကိုက်ညီသောအနုပညာanice ယာဉ်ဖြစ်ပါတယ်။
သေးငယ်တဲ့အိပ်ခန်း, ဟိုတယ်အခန်းပေါင်း, ယောဂ, Spa, ကလေး ROOM တွင်ပင်အလုပ်ခွင်မှစိုထိုင်းသော, အဆင်ပြေလေထု add ဖို့စံပြလမ်း။ မိသားစုနှင့်ရနံ့ကုထုံကိုချစ်သို့မဟုတ်ရနံ့ကုထုံအနာပျောက်စေသောအရာမှအကြိုးပွုနိုငျတဲ့သူမိတ်ဆွေများကိုအဘို့အပြီးပြည့်စုံသောဆုကြေးဇူးကိုစိတ်ကူး။
စစားသုံးဆီများအများအပြားပေါက်ပေါင်းထည့်ခြင်း, ကချစ်စရာကောင်းတဲ့အမွှေးအကြိုင်နှင့်သင်၏အာကာသဖြည့်ပါလိမ့်မယ်။ baby.It, သင့်အိပ်ပျော်ခြင်းတိုးတက်စေသင့်ရဲ့အသားအရေအနာရောဂါကိုငြိမ်းစေနဲ့ပိုပြီးနိုငျသောကွောငျ့သငျသညျမြားကိုလညျးကိုက်ညီ like.It လျှင်သင်တို့သည်လည်းတစ်ဦး humidifier အဖြစ်သုံးနိုင်သည်။
1000 သတ်မှတ်မည် / သတ်မှတ်ပေးသည်
စက္ဏူထူနှုန်း 12 PCs
သင့်ရဲ့ချစ်ရသူကူးစက်ခြောက်သွေ့အိုက်လေထုနှင့်တုပ်ကွေး / အအေးပိုးမွှားကာကွယ်တားဆီးဖို့သင့်ရဲ့လူနေမှုအာကာသ Humidify ။ ခြောက်သွေ့တဲ့ဆောင်းလထဲမှာခြောက်သွေ့အခန်းကနေအသားအရေကိုကာကွယ်တားဆီး, သင်ပိုကောင်းအိပ်ကူညီလျော့နည်းချောင်းဆိုးခြင်းနှင့်ခြောက်သွေ့သော sinuses သက်သာစေနိုင်ကြောင်း။
ဒါဟာသဗေဒနှင့်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောအဆီများကုသမှုကုထုံးရည်ရွယ်ချက်များနှစ်ဦးစလုံးအားဝတျပွုနိုငျသညျ။ လေထုထဲသို့မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောရေနံ microparticles ၏ပြန့်ပွားခြင်းအားဖြင့်, ကလေကြောင်းမှအောက်စီဂျင်မော်လီကျူးကိုထည့်သွင်းလိမ့်မည်နှင့်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောအဆီများကိုထိရောက်စွာ, သင့်ခန္ဓာကိုယ်ဖြေလျှော့ခြင်းနှင့်အိပ်ပျော်ပိုမြန်လဲပိုပြီးအထောက်အကူဖြစ်စေနေထိုင်နေကြများအတွက်အဆင်ပြေပတ်ဝန်းကျင်ကိုဖန်တီးနိုင်သောအနံ့, ပပျောက်ကိုကူညီပေးပါတယ်။
အလင်းကို Button လေး:
အရောင်အလင်းပြောင်းလဲနေတဲ့ 1 စာနယ်ဇင်း။
2 စာနယ်ဇင်း, တဦးတည်းအရောင်အလင်းကို fix ။
ဦးဆောင်အလင်းကို turn off တဖန်နှိပ်ပါ။
အခိုးအငွေ့ Button လေး:
အစိမ်းရောင်အဆက်မပြတ်ခိုးအငွေ့ညွှန်ပြချက်အလငျး၌ 1 စာနယ်ဇင်းယူနစ်အလုပ်။
ပြတ်တောင်းပြတ်တောင်းအခိုးအငွေ့အတွက်2စာနယ်ဇင်းယူနစ်အလုပ် 20s အလုပ်လုပ်ပါတယ်။ 10s ရပ်တန့်။ အပြာရောင်ညွှန်ပြချက်အလင်း။
တိုးတိုးလေး-တိတ်ဆိတ် Ultrasonic စစ်ဆင်ရေး
အဆိုပါ Ultrasonic ပျံ့သင်ငြိမ်းချမ်းသောကြွင်းသောအရာနှင့်အပန်းဖြေပျော်မွေ့ကူညီရန်တိတ်ဆိတ်လေသံတိုးတိုးဖြစ်ပါတယ်။ ကလေးတွေနှင့်အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များအဘို့ဘေးကင်းလုံခြုံပြုလုပ်ခြင်း။ အဆိုပါ '' အော်တိုပယ် '' function ကိုသင်သည်သင်၏ပျံ့ပိုင်ရှင်မဲ့စွန့်ခွာဖို့ခွင့်ပြုပါတယ်။
2 ။ ကနဦးဝယ်ယူမှုတွင်ထည့်သွင်းမဆိုရေနံ?
3 ။ အလိုအလျောက်ပိတ်ထားသလား
2.Do တစ်ကြိမ် 150 ml ကိုကျော်ဖြည့်မရ
3.Essential ရေနံဖိတ်၏အမှု၌ထို့ကြောင့်ရှုတ်ချနိုငျသညျ, ပျော့ပျောင်းသောအထည်နှင့်အတူကွယ်ပျောက်သုတ်ကျေးဇူးပြုပြီး
ပျောက်ကလေးများနှင့်အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များအနေဖြင့် 4.Keep ပျံ့ humidifier ultrasonic